Hospital - Jiangsu Hengyun Power Technology Co., Ltd.
Hospitals haysato a awood dheeraad culus. Awoodda isbitaalada gabi ahaanba ogolaanaya ma ta interrup- iyo waa in la siiyaa hab super aamuseen. si ay u buuxiyaan shuruudaha dalbanayaan, matoorrada awood u waa in uu leeyahay qaab ciyaareed aad u fiican, sidoo kale AMF iyo ATS waxaa looga baahan yahay.
Shuruudaha iyo Caqabadaha
Wax soo saarka xoog deggan 24 saacadood oo isku xiga ee xoogga lagu qiimeeyo (10% dollar muddo 1 saac ah la ogolaan kasta 12 saacadood), in shuruudaha soo socda.
Altitude height 1000 mitir oo hoos.
Heerkulka xadka hoose -15 ° C, xadka sare ee 40 ° C
korontada waa in uu ahaadaa super hooseeyo si ay dhakhaatiirtu ku shaqayn karaa xasilloon, sidoo kale bukaanka yeelan karaan jawi nasasho loo igmaday.
qalab 3.Necessarily difaaca
Mashiinka ayaa si toos ah istaago oo ku siin signalada in arrimaha soo socda doono, saliid cadaadis hoose, heerkulka sare, in ka badan xawaaraha, bilaabi failure. Waayo, auto bilaabi danab xoog leh function AMF, ATS caawiyaa ay ogaadaan auto bilowga iyo stop auto. Marka ugu weyn ee ay ku guul daraysato, matoor awood bilaabi kartaa 5 seconds (hagaajin) gudahood. matoor awood u bilaabi kartaa keligeed isku xigta saddex jeer. wareegista ka load weyn load matoor dhameystiray 10 ilbiriqsi gudahood iyo gaadho qiimeeyo saarka awoodda wax ka yar 12 ilbiriqsi. Marka awood dhaxe helo dib, matoorrada si toos ah joojin doonaa 300 ilbiriqsi (hagaajin) ka dib markii mishiinka qaboobeyso gudahood.
waxqabadka 4.Stable & isku halaynta sare
Celceliska bareeg failure: aan ka yarayn 2000 saacadood
kala duwan xeerka danab: 0% load u dhexeeya 95% -105% ee danab lagu qiimeeyo.
matoorrada awood fiican, oo leh PLC-5220 module gacanta iyo ATS, hubaal korontada degdeg ah waqti isku mid ah ugu weyn ee ka dhammaatay. danab ku ansixinayaa design buuq yar yahay, iyo waxay ka caawisaa awood siin jawi xasilloon. matoorada waa waafaqsaneyn heerarka warshadu hawada Yurub iyo Maraykanka. Mashiinka waxaa la xiran karaa computer la RS232 AMA RS485 / 422 xira in ay ogaadaan hago.
l saarka set oo dhan oo u soo jeesan-muhiimka ah caawimaad xal macaamiisha isticmaalaan mishiinka si fudud oo aan aqoon farsamo badan. Mashiinka waa fududahay in la isticmaalo iyo sii wadida. l nidaamka gacanta waxa uu leeyahay shaqo AMF, oo auto bilaabi kartaa ama joojin mishiinka. In degdeg ah mishiinka siin doonaa qaylo iyo joojin. l ATS waayo doorasho. Waayo, mashiinka KVA yar, ATS waa lagama maarmaan. l qaylada Low. Heerka buuq ah mashiinka KVA yar (30kva hoose) waa hoos 60dB (A) @ 7m. l waxqabadka Xasilloon. Celceliska bareeg failure ma aha wax ka yar 2000 saacadood. l size Compact. qalabka Optional la siiyaa shuruudo gaar ah hawlgalka deggan qaar ka mid ah meelaha qabow lagu keydsho iyo gubanaya meelaha kulul. l Waayo, si bulk, design caadada iyo horumarinta waxaa la siiyaa.
Products Hot - Sitemap - amp Mobile
Marine dhaliyaha Shirkado cusub , Marine Diesel Generator Manufacturers, Marine Generators For Sale, Sdec Marine Diesel Generator, Sdec Marine Diesel Generators,